Zimbabwe Yotanga Kuyedza Mashandiro eMichina yeKuvhotesa yeBVR
Zimbabwe Yotanga Kuyedza Mashandiro eMichina yeKuvhotesa yeBVR	April 20, 2017 c263afri Matongerwo eNyika Leave a comment	WASHINGTON — Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission, ZEC, chekuita misangano nemakambani anotengesa michina yekunyoresa vavhoti yeBiometric Voters Registration chiri kutanga nemusi weChisghanu chichipera nemusi weChitatu svondo rinouya.
Makambani ari munyika kuzoshambadza michina yavo anoti Laxton Group yekuChina uye Dermalog Identification Systems yekuGermany.
Kambani yechitatu yeZETES yekuBelgium haina kuzobudirira kuuya.
ZEC ichasarudza kambani imwe chete pambiri idzi yekupa basa rekuunza michina yeBVR. Michina iyi ichange ichiongororwa mashandiro yawo kuHarare Polytechnic ne Mabvuku Primary School nemusi weMugovera ozopedzisira kuMurape Secondary School neSvondo.
Makambani aya achange achinyoresa vavhoti kuti paonekwe kuti michina yavo iri kushanda zvakanaka here.
Chikoro chega chega chanzi chiunze vana zana nemakumi mashanu vari pasi pemakore gumi nemasere.
ZEC yadaidza vemapato ezvematongerwo enyika uye masangano akazvimirira oga.
Mukuru weElectoral Resource Centre, VaTawanda Chimhini, vanoti havasi kufara nenyaya yekuti havasi kutenderwa kubvunza mubvunzo kumakambani aya.
Uhu ndihwo hurongwa hweZEC:
20 Kubvumbi 2017
21 Kubvumbi 2017
Laboratory Test (Hardware and Software checks)
22 Kubvumbi 2017
Training of voter registration operators
23 Kubvumbi 2017
Field Test (mock BVR registration)
24 Kubvumbi 2017
25 Kubvumbi 2017
Murape Secondary School – Seke
Field Test (shock and waterproof tests)
26 Kubvumbi 2017
Mutasa now believesBoom Berto in maiden UK tour